Yintoni enokuyenza ukuze ugweme uxinzelelo?
Akusiyo imfihlakalo kunoma ubani ukuba umntu wanamhlanje ubungozi ukubilisa zonke iisibini aze ajeziswe. Nangona kunjalo, igama elixhatshazwayo "uxinzelelo" aluphendulanga kwiimvumi ezikhulu ezivela kubaphathi, inkampani embi kwivenkile yokudlela okanye ummelwane ophethe ikati-hysteroid. Akaveli ngaphandle - uhlala kuthi kwaye akafuni izizathu ezikhethekileyo zokubonakalisa. Ekubeni bakho, unokuyithembela kuwo ukunyuka kwamaxabiso kunye ne-bulb light lighting in the entrance, into ehambayo kwizothutho kunye nekhomishoni eyongezelelweyo evela kumphathi, kungakhankanyi ukudibanisa noluntu kunye nokunyamekela i-future of loved ones.
Yonke into ekhangayo kwinkqubo yeentlanzi ingabizwa ngokufanelekileyo ukuxinezeleka. Umbuso ovimba ukuveliswa kweemvelo ze-hormone yolonwabo, ugqithise ubugqwetha kunye nokuphazamiseka kwemizwa yethu. Ukuqokelela, ukhokelela ekusilaleni, i-syndrome yokukhathala okungapheliyo kunye neengxaki zempilo ezinzulu. Ubuncinane ukuhlala ungathembekanga. Inkqubo yokucwiliswa kwizinto ezingalunganga ihamba kancane kwaye ifihlakele. Khangela abavakalisi asebekhulile kwivaranda. Baye bakhube baze babuke umbuzo, ngokugweba. Gquba ixesha lefilimu kwaye ubone njengamantombazana amancinci, amantombazana amancinane - umfanekiso uya kuhluke ngokupheleleyo. Ukumomotheka, ukuhleka, ukukrakra, ukukrakra, kunye nokuba mhlawumbi kakhulu, kodwa kuseneliso elithembekileyo, ithemba eliqaqambileyo. Ezi njenjalo ke. Ngamanye amaxesha into ethile ayizange idibanise. Ukuphendula okukodwa kwaqokelelwa ngomnye, kugxininiswe, waba ngumkhuba kwaye waba ngumlingiswa. Isiphetho: ukuhlangabezana nekhulu leminyaka, ukunyathela ngokunyanisekileyo kwimigqomo kunye nokumomotheka ngokukhawuleza ehlabathini, ukubeka isiseko sezinto ezilungileyo ngoku. Yintoni enokuyenza ukuze ugweme uxinzelelo kunye nokuphelelwa yithemba?
Olu hlobo luvuyo luquka uninzi lwabantu basebenzayo belizwe. Ukuba neurotic kudidekile, ukuba kube yinkampani. Uhlala ukhathazekile ngento ethile. Ukuxhalabisa kuza kwaye akupheli. Izihlandlo ezilishumi ukuphindwa kabini ukujonga nokuba uthathe izitshixo, ingaba ifowuni yefowuni yayisendaweni kwaye ingaba "inkomfa" evelelwe kwisihlwele ikubhekiselele ... Ukuqhawula iinyembezi ngokuhlonipha intambo ephukileyo. Oku kuqhelekileyo kubo bonke. Ukuhleka, ke iinyembezi, ngoko kuthengiswa ... Ubuntu obuthathekayo bufuna uthando olungathandabuzekiyo kunye nokwamkelwa kwabanye. Kodwa nangona ufumana, akazithembi. Konke kubonakala ngathi iimvakalelo ezifudumeleyo zazingasifanelanga. Loo mntu akakholelwa ukuba uvuyo lude. Akunjalo kuye. Kwaye nangona yonke into ihamba kakuhle, elinde ukukhohlisa okungcolileyo, ukwesaba ukwenza impazamo kunye nokutshabalalisa uxhumo olunobungozi ngezandla zomntu. Ngokubuhlungu kukuba, uyaphumelela. Umoya uthanda. Abantu abanjalo banesifo esingenakulinganiswa: abanemvakalelo embalwa, imbonakalo, ingqalelo. Akukho nto eyaneleyo nangenxa yokuba ayenqabile ukungavumi nantoni na kwabanye okanye ayinike. Baya kufinyelela kwiindawo ezingenakufikeleleka, bekwesaba yonke into. Ixesha elide. Ngaphambi kokutshintsha kwimo sengqondo ebomini. Ubomi obunempilo kubantu bonke - ngaphezulu okanye ngaphantsi. Kodwa abanye banako ukuhleka iingxaki baze bafumane ngokukhawuleza, abanye bawachukumise umnyaka emva konyaka, ade bafumane isisithi sokuzilahla okanye "nje" abonakalise umlingiswa nhlobo.
Abaninzi bethu baqhelana nemimoya ekhethiweyo kungekhona ngeengxolo. Xa zonke izinto ziwela ezandleni, isondlo sinyamalala, i-makeup iyala, inja ayifuni, ikati ayiguquli umlenze. Indoda ngumxholo ogulayo. Ubuthongo abugcini, incoko ayifanelekanga (kwaye kungekho mntu), ubomi abukwakhiwe, ukuzibona ngokweenkcenkceshe kuyashintsha kwinqanaba lokungabi nalutho. Kulo rhulumente, akunakulungele ukuba umntu athi ubomi buvuyo kunye nokukhanya. Ephendula, uphenduka: "Awuyiqondi into eyinkimbinkimbi yimeko yam." Awuyiqondi ngokwenene. Kukho amaxesha apho ithemba lingenanto yokuya kwiindawo zokudinga. IiHormones zipenda isibhakabhaka kwaye zikhwaza phezulu kwelizwi alisoze lilungele, kwaye ukunywankqiswa kobuhlobo beentandane kukunqoba kweedemon ezimbi.
Ukucaphukisa xa umntu ofuna ukufumana iimvakalelo ezintle ngokusemthethweni ugijimela kwivenkile.
Ukuxhomekeka kwi-"Happy Farmer" kunye neTetris. Efanelwe ukungabikho komnqweno wokudlala empilweni yangempela.
"Erotomania", kwiinkulungwane ezidlulileyo ezithiwa ukukhonza izithixo. Ukuxhomekeka kwizinto zokudumisa. Unononophele ngentshiseko ngoJohnny Depp, uvumelekile?
"Ukuxhomekeka kubuhle" (ukutshaya ubuhle) I-mania entsha, echaphazela malunga ne-30% yabasetyhini kwizixeko ezinkulu kunye ne-15% yamadoda. Olu hlobo lwesifo luye lwaqokelela phantsi kwentloko yayo yonke impi yamacandelo, njenge:
I-Anorexia yinto yokunyaniseka kokulahlekelwa isisindo, ekhokelela kwisifo esibi kakhulu;
Ukuxhomekeka kwe-Tanorexia ekutsheni kwelanga, okuye kwaye kwaqheleka ngokuza kwee-salon ze-tanning;
Ukuxhomekeka kwizonyiso. Ukujongana nabantu ngaphandle kokwenza. Amantombazana athathekayo aba neentlanzi kwaye azingenise kwiingca. Ifom ephezulu ibhekwa njengesidingo esingenakunyaniseka sokuhlinzwa kweplastiki, i-botox, ukuphakamisa, ukuvuselela kunye nezinye iinkonzo ezingabizi.
Imeko eyahlukileyo okanye uchungechunge lweziganeko kwakungekho kumazinyo e-psyche yakhe, kwaye wayenza ngendlela ekhohlakeleyo. Oogqirha bathi ukuxilongwa xa uziva ugule kwiinyanga ezintlanu ukuya kunyaka. Kodwa siyazi ukuba bayazikhusela ekuthengisweni kweeklinikhi, kwaye asicebisi ukuba silinde ixesha elide. Isalathisi "ukudakumba" isitya sithumela kuphela kula matyala xa sele sele sidinwe zonke izixhobo zangaphakathi kunye nezindlela zokukholisa. Ukuba umculo wakho ozithandayo awugcini kwaye ukunganakwa kwakho kuthatha ixesha elide kuneentsuku ezintathu, khangela uncedo kwicala. Ukuba akukho mntu uyamthembayo, okanye ingxoxo ngentliziyo-ntliziyo ayizange ifake impumuzo, iya kwi-ingcali. Umgqirha kwaye akayonto leyo ikhupha ngaphandle kwesigxina sokuphelelwa yithemba.
I-Paranoia: yintoni, isabisayo?
Ayinanto efana ne-straitjacket okanye ikhamera enye yeselula. Nangona ukuba unqabana nolu hlobo lwenkqubo yeentlanzi kunye nazo zonke iintlobo zokutya kwaye ukondla ingxubusho entloko yakho, unokwenza uxhaphalo kwaye uqaphele i-rudiments ye-sclerosis. Ngokuzihlawulela, ubeka iibhloko kwaye ubeke izitena, apho i-paranoia yakhiwe khona. Emva koko intliziyo yanda, yonke into iyabuhlungu kwaye ukhawuleza ukhathala. Nesidlo, kwakhona, into engaqhelekanga yenzeke, kodwa udla ngokukhawuleza kwiimpawu zeempawu ezihlukahlukeneyo, ukuba kunzima ukuyiqwalasela njengento yokubonisa into ethile. Kwinqanaba elidlulileyo, loo mqathango kunzima ukudibanisa nento ethile, kodwa iimpawu zokuqala zilandelwa kuwo wonke umsebenzi we-ofisi yesibini. Oku akuthethi ukuba kufuneka ubhalise nomfo wezifo zengqondo, kodwa oogqirha bacinga ukuba isimo "sesigqirha" sempilo somphathi oqhelekileyo siphathwa njengesifo esibi, kodwa kungekubi. Kwesinye isikhathi ikati ngaphandle kwefestile ayifuni ukumela iminqweno yeenkonzo zesefihla, zithembisa ukuba uxabise inkqubo yesantya. Isiqhelo sesimo sengqondo sisengqondweni, kuba abantu baye bavela kulo, ngokusekelwe kumntu ngamnye wangaphakathi, kodwa ngenxa yokukwazi ukungahambelani noluntu. Ukuba unako, oko kuyinto eqhelekileyo. Yaye ukuba ufuna ukwahlukana, bhengeza ilungelo lakho kumntu ngamnye okanye uvume ukungaqhelekanga, oko kukuthi, umahluko kumaconsi awamkelekileyo. Iintlobo ze-neuroses ezihlangeneyo ziyinto ebalulekileyo yeso sikhundla. Zivela kwiimeko ezinokungaxhasi kunye neemeko kunye nesakhelo esiphila kuso. Sigxininisa iinkcukacha ezidangalisayo - kwaye sizithobe izikali zabo ngamava onke. Ngale ndlela, iingxaki ziyaqhakaza, kwaye sizongena kwi-cocoon kwi-negative. Ukuze ubaleke kuyo, qalisa ukuzinika iholide ezincinane. Uhlala usebenziseka ngokukhawuleza. Zama - uza kutsalwa kwaye ube yizo zonke iinkalo zobomi ukuze uqaphele ukukhanya okugqwesileyo, kunomdla kakhulu, uvuyo. Jonga ngokukhawuleza, khangela-kwaye yiyiphi i-aerobatics - ngezandla zabo ukwenza izihlandlo zonwabo.
I-Schizophrenia: loo nto ingcinga!
Ekuguquleleni ukusuka kwisiGrike, lithetha "isizathu esichaseneyo." Asiyi kuzama ngokwayo. Siza kuthetha kuphela ngeyona nto ayinakuyenza ngaphandle kokukhohliswa kunye neengcamango. Kwaye-phambili-konke, kunye nabanye "ukufudumala okungahambi kakuhle". Uluntu alukwazi ukubizwa ngokuba yindawo ekhululekile kuyo. Iimpawu zokuqala zivela kwiinyanga ezingama-30 ngaphambi kokuqhambuka. I-Schizophrenia ikhula, ukuba kukho imimiselo engathandekiyo-iziganeko ezibuhlungu kakhulu, iziganeko zofuzo okanye ukuphazanyiswa kwehlabathi jikelele emsebenzini wengqondo kunye nenkqubo yesifo.
Ukuba ngaphambi kokuba ungene kwiofisi yabasemagunyeni, usula i-mantra okanye i-validol udle uxinzelelo, ngoko uyazi ukusazela. Ukukhwela kwangaphakathi, ukugubha kunye noyiko, kunye neenkwenkwezi ezincinci ukuya kwenye indawo ekupheleni kwendlela, uphuze amanzi. Kwaye ukukhupha, jonga kwisibuko, indlela iliso elijongene ngayo, qaphela indlela iminwe yokuthuthumela ngayo, intliziyo igxuma. Ngamanye amaxesha i-dizzy, iphosa into ethile ekutshiseni, ngoko kubanda. Kwaye njalo malunga nemizuzu elineshumi elinesibini-isigxina seyure. Ixhaphaza ngokuphindaphindiweyo ngenxa yezizathu "zokunyaniseka", "umntwana" kwaye "akufaneleki nakanjani". Ngamanye amaxesha ukwesaba kuza kwesigulane: hamba, ufe, wenze isenzo esingalawulekiyo. Uzama ukuhamba ngokukhawuleza, engazi apho. Ukuhlaselwa kungaphazamisa ngokungalindelekanga, kuphinda. Kodwa i-alamu kufuneka isandile kuphela ukuba bahamba ngokutyelela kaninzi ngaphezu kweveki okanye ukuba kukho ukwesaba "ukubuyela kwakhona".
Ukuba unomsindo ngokukhawuleza, uzimelele kwaye uzimelele, ucinga ukuba uyintoni na umntu kunye nayo yonke into, sinokuvuyisana - unomdla. Inika umsebenzi ogqithiseleyo - oku xa ufana nomxube we-propeller kunye nomxube. Kwaye uqhubeka uthetha ngokungapheli, gxuma kwisicatshulwa ucinge, ungagqibekanga. Kunzima ukuba ugxininise, ucinga ukuba ukuchitha ixesha lokuphupha kuyinto yokunethezeka. Ubuncinane be-nap - kunye nomyalelo (kuyamangalisa ukuba kukwanele kuwe). Into ephakamileyo kakhulu malunga ne-mania yi-self-esteem self-esteem. Ukuba umntu avumela ukuhlazisa abanye okanye ukuzicingela ukuba yinyaniso eyona nto, mhlawumbi kungekudala kwaye uBill Gates akayi kuba nguye igunya. Akakho. Kuyathakazelisa ukuba loo maqabane abandakanyeka lula kuzo zonke iintlobo zemisebenzi enobungozi kwaye asebenzise imali ngokuthenga izinto ezingenanto. Phakathi kwethu, enye yeentlobo zeengxaki zomntu yi-erotomania. Uqhuba umngcipheko wokufumana olo xilongwe xa uqala ukukhanga into yokubonga kwakho, nangona uhlazo lwakhe. Ukuba le nto ihambelana neengcamango eziqhubekayo, ingxaki yokulala kunye nokungabikho kwesidlo, uyazi ukuba "uthando lwakho olungathandabuzekiyo" lufana nesifo sengqondo kwaye luphathwa ngokukhawuleza ngexesha leeseshoni ngophando.
Ngaba uhlamba izandla ngaphambi kokutya? Wenze kakuhle! Ukholo lweentsholongwane? Ukunyamezela. Nokubamba umphathi wesango kwindlu yangasese kunye nokuphefumula kwisihlwele? Nawe? Lapha sele sele ukhumbuza ukuxilongwa. Ukuba ukwesaba ukunyathela kwiintsikelelo kwi-asphalt, ngoko ukhonjiswe. Izifo ezibuthathakayo zikhona ezininzi (sibonga ukupapashwa kwezindlu zangasese kunye namayeza), kodwa akufanele uqale le meko. Xa isifo siqhubeka, iingcamango "ezinamatheli" asishiyi okanye athathe ikhefu elincinane ukuba abuyele kungekudala. Ukuba yonke into ibaluleke kakhulu, umntu unokucinga malunga nokulimaza abanye. Kwaye ukuba kungenjalo, yiba nje i-amorphous. Inkqubo yokuqhekeza ibuyisela ngokungafanelekanga, imlahla intando yakhe. Ngaba uyazi ukuba kunzima kangakanani ukukrazula i-tangle yeengxabano zangaphakathi? Uyazi. Umzekelo ocacileyo weentlanganiso zamaqabane mhlawumbi uyazi. Umhlobo othe xaxa weshumi uhamba ngaphaya kwendlu ngaphambi kokushiya, kwaye ubuya kwakhona amaxesha amathathu ukuhlola ukuba kuvaliwe. Okanye uhlamba ikhulu kangangeentsuku, ubamba "uhlambuluko jikelele" kwaye ubeka yonke into ngokungqongqo. Ukhokelela ekudakaleni, ukuzibulala, ukutywala utywala, kwandisa i-schizophrenia. Ngokomzekelo, amanyathelo akho ukusuka ekungeneni kwakhe kubhakabhaka elisondeleyo. Ngoko ukuba uzimisele ukuba ungaphi amanyathelo ukusuka emnyango wangaphambili ukuya kwindlu yakho - akunakwenzeka ukuba uhlambe izandla zakho!
Ifilimu ekhohlakeleyo okanye ukukhanga okugqithiseleyo kunokukritha iingxaki zakho. Ngabo, sinquma isabelo kunye nokunyaniseka kokwesaba. Ngamanye amaxesha kubhengezwa ngaphandle kokucela imvume yakho, ukuguqula isilwanyana semfuyo esingaphaya kweengcamango kunye neziphakamiso zesigqibo. Kwaye kukho iimeko ezithile. Uyakuvuyela ukungathathi izicabucu okanye iindiza entliziyweni, kodwa awukwazi. Iimvakalelo ezinjalo ezinokuthi zingabangela izinto ezifana neklasi - indawo evaliweyo, indiza, indawo, izinja kunye nomntu ngamnye. Ukuwela kwi-stupor evela kwintando okanye phambi kwesini esahlukileyo. Ayinakunqwenela, engaqhelekanga ... Kuhlazo, ekupheleni! Kwaye ngamanye amaxesha ukuphosa kunokwenzeka ukuthetha ngendlela yokwenza izinto kwaye uloyike, umzekelo, i-mannequins, ummelwane wesini esinikiweyo okanye isigqibo kwisifriji, ukulibala ukufunda okanye ukubona ihashe elimnyama. Kwaye nabalandeli be-ballet, imigca emide yeentlanzi okanye iintlanganiso kunye ne-baboon yaseAfrika kwi-metro ...
Ukuba kukho enye ingentla apha ifumaneke kuwe, kwithuba lokuba ucinge ngokucokisekileyo malunga nendlela ophila kuyo. Oku akuthethi ukuba unomsebenzi ombi okanye awukuhambelani kakuhle kwintsapho - awukwazi nje ukujonga iinjongo zeengcinga, ukunyamekela kuyo yonke into kwaye ungazange ube eholide ixesha elide. Iingcali zengqondo ziyabona ukuba imbangela yobuninzi beengxaki ezingenakufuna ukulaliswa esibhedlele kufuneka zifunwe ebuntwaneni. Uphindaphinda ngokuxinzelela ukuba umntu ubonakaliswe kulo lonke ubomi. "Qala kabusha" inkqubo engafanelekanga, unokufunda ukuphendula ngendlela entsha ukuya kwiimeko eziqhelekileyo, okanye uguqule utshintsho kwiimeko zezinto: uye kwenye eminye imisebenzi, uyeke ukuwa phantsi kweemeko ezingafaniyo (nje ngenxa yokuba uzidala ngokwakho), thintela into ethile, nokuba. Kunzima kunzima ukulwa nokukhungathekisa ngokwakho, kuba umntu akaziboni ngaphandle kwaye iimvavanyo zakhe zithandwa kakhulu. Kulula kakhulu ukukholelwa ukuba ihlabathi lonke lihlaziye kwaye ukhangelelwa yi-CIA, kunokuba uvelise ingcamango ngakumbi. Nangona kunjalo, ngelixa ukwazi ukuhleka, ulawula imeko. Zibhalele ngokwakho, ukuba ungena, phumula uphinde uncumoze ngakumbi - uze ukhohlwe indlela enkulu yeengqungquthela zentliziyo yakho ekhayeni lakho!
Reiki: ukucoca i-aura yakho
Ukusetyenziswa kweoli yelitye kwizonyango zabantu ukuze unyango lwezifo
Amehlo atshayo: izizathu kunye nonyango
Iindlela ezikunceda ukuyeka ukutshaya kalula
Iodine, indima yemvelo emzimbeni
Sitshintshe ubomi bakho ngebhanki ehlakaniphile ONETRAK!
Ukuphulukiswa kunye nemilingo ye-variscite
Ungazilungisa njani ngemizuzu eyi-10?
Ukutya okusemgangathweni kwimpilo yentliziyo
Liliphi ixesha lonyaka kungcono ukuba ugonywe?
I-Meteopathy: imithetho emithathu "yokuzimela" kwimozulu
Indlela yokwenza iimfono zokufihla iimpawu zokukhathala
U-Ksenia Borodina wenza iholide enkulu yaseNdiya, ifoto
Ukuhlengahlengiswa kwangaphambili komzimba
Yintoni ekudliwayo okungenayo i-gluten?
Indlela yokulungiselela umntwana esikolweni imizuzu engama-20 ngosuku
Ikhalenda yeMbewu ngoJanuwari 2017: Iintsuku ezifanelekileyo zokuhlwayela iitamatato zenzalo zenyanga kunye netafile zgadi yegadi
Imibongo enhle yowesifazane wakho othandekayo
Indlela iVithamini A isebenza ngayo ubuso
Ndimele ndizikhumbuze kangangoko umfana?
Igalelo elimnandi: izakhiwo eziwusizo
I-Carp igxutywe ehovini
Yintoni i-Restless Leg Syndrome?
Ubumnandi bezingane: silungiselela i-curd cheese blancmange kunye nama-raspberries kunye ne-cocoa
Ukwandisa umxhesho (inkqubo yokunyanzela inkqubo yePhytoceane)